Isticmaalayaasha isticmaalayaasha metrobus ayaa bixinaya dareenka.
Shirkadaha korantada ee Istanbul Electric Tram iyo tunnel, ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in saldhiga Merter metrobus ay sabab u tahay shaqada dayactirka ee aan lagu qaban karin duulista rakaabka iyo isku imaatinka. IETT waxay sameysay bayaankan soo socda: Saldhigga metrobus Merter waa la sameyn doonaa [More ...]
Qalabka baabuurta la xado oo laga dhigo khadka tareenka Merter
Alaarmiga gawaarida la xado ee khadka tareenka Merter: Kooxo boolis ah ayaa muddo dheer isku dayay inay ka saaraan gaariga xatooyada ah khadka tareenka, iyagoo ka digay booliiska gaariga xaday ee ku haray khadka taraamka ee Merter. booliiska [More ...]
Shilka Metrobus 5 ayaa ku dhaawacmay Merter
Shilka Metrobus ee Merter 5 ayaa dhaawacmay: metrobus kale ayaa ku dhacay metrobus oo sugaya joogsiga Merter. Dadka 5 ayaa waxyar dhaawacmay. Jihada Avcılar shilka awgiis dartiis lama sameyn karin in muddo ah. Gaariga Metrobus ee Kadikoy [More ...]
Gaadiidka ayaa u duulay joojinta metrobus
Gawaarida ayaa u duulay joogsiyada metrobus: Qofka 4 qof ayaa dhaawac fudud ka soo gaadhay gaadhiga halkaas oo barxadda leexinta ay ku xayiran tahay fallaarta .. Gawaarida E-5 Light ee ka baxay koontaroolka Highway Merter, ayaa ku dhacay illaa mitir 200 [More ...]
Recep Bozlağan: Isku xirka Degmada XMUMX Marmaray
Professor Dr. Recep Bozlağan: Degmada 13 waxay ku xiran tahay Marmaray. Dr. Recep Bozlağan, 9 Aksaray-Yenikapı metro line ayaa la furi doonaa maalinta Axada ee November iyadoo leh 5 [More ...]
Dib u furida gaadiidka ee Istanbul
Go'aanka Gaadiidka ee Istanbul: Yandex falanqaynta taraafikada Istanbul; Bishii Oktoobar, darawalada 2012 iyo 2013 waxay u baahan yihiin inay ku dhex socdaan wadooyinka iyo jidadka ugu muhiimsan ee isku xira xaafadaha magaalada iyo bartamaha magaalada. [More ...]
Darbiyada magaalada Istanbul waxaa lagu qurxiyay ubaxyo joogsi istaag Magaalo xeebeedyada Istambul waxaa lagu qurxiyay derbiyada isgoysyada leh ubaxyo isweydaarsigana waxaa lagu iftiimiyey nalalka LED. Sida laga soo xigtay Dawladda Hoose ee Magaalada, aragtida cagaarka, waxay ku xadidan tahay jardiinooyinka iyo jardiinooyinka [More ...]